dulce de leche နှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်တို့နှင့်အတူ brownie cheesecake Bezzia
dulce de leche နှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်တို့နှင့်အတူ brownie cheesecake
မာရီယာ vazquez | 12/10/2021 10:00 | အချိုပွဲ
ဒီနေ့ငါတို့ Bezzia မှာမခံနိုင်တဲ့ချိုမြိန်မှုကိုပြင်ဆင်ဖို့မင်းကိုဖိတ်တယ်။ တစ် ဦး brownie cheesecake ကို dulce de leche နှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်တို့နှင့်နယ်ထားပါ ဒါမှမဟုတ်ဘာနဲ့တူလဲ၊ brownie အလွှာပါသောအချိုပွဲနှင့် dulce de leche နှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်တို့နှင့်ဖြည့်ထားသောဒိန်ခဲမုန့်၏အခြားတစ်ခု။ ဗုံး!
၎င်းသည်ပေါ့ပါးသောအချိုပွဲမဟုတ်ပါ, ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိုမြိန်တဲ့အရသာပေးချင်ရင်ဒါဟာကြီးမြတ်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းသည်ကြာရှည်မည်မဟုတ်၊ ၎င်းအတွက်အသုံးအဆောင်များစွာလိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ် ဦး Blender, ပါဝင်ပစ္စည်းများရောနှောဖို့ပန်းကန်လုံးအနည်းငယ်နှင့် 20 × 20 စင်တီမီတာမှိုလုံလောက်သည်။
ဒီအချိုကိုမင်းကြိုက်သလိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ထည့်ပြီးပြီ caramel သစ်ကြံပိုးခေါက်တို့၊ ဒါပေမယ့်မင်းဒီပါဝင်ပစ္စည်းများမပါဘဲနဲ့အဲဒါကိုရနိုင်တယ် စကျင်ကျောက်အကျိုးသက်ရောက်မှု brownie batter နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး သို့တည်းမဟုတ်သင်မာနကြီးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစွန့ ်၍ အခွံမာသီးအချို့ကိုထည့်နိုင်သည်။ သင်မိတ်ဆက်သောမျိုးကွဲများထက်အရေးကြီးသောအရာသည်သင်preobéisဖြစ်သည်။
3 ဥ L
၁၈၀ ဂရမ်။ ဒိန်ခဲမုန့်
60 ဂရမ်။ သကြားဖြူ
vanilla အနှစ်သာရ၏ 1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
brownie ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ပြုလုပ်နိုင်သည် ချောကလက်ကိုထောပတ်နှင့်အရည်ဖျော်ပါ ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲတွင်မိုက်ခရိုဝေ့ဖြင့်မှုတ်ပါ။ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားဖြင့်စက္ကန့် ၃၀ ကြာအပူပေးပါ၊ ချောကလက်အရည်ပျော်သည်အထိစက္ကန့် ၂၀ ကြာမွှေပေးပါ။
Después ကြက်ဥကိုလက်ဖြင့်ရိုက်ပါ ရောနှောထဲသို့လေအလွန်အကျွံမထည့်ဘဲ
တစ်ခါလှုပ်တယ် သကြားနှင့် vanilla essence ထည့်ပါ ချောင်းများနှင့်ရောပါ။
ထိုအခါ ချောကလက်အရောကိုထည့်ပါ ထောပတ်ကိုနည်းနည်းချင်းမွှေပြီးမရပ်မနားမွှေပေးပါ။
နောက်ဆုံးတော့ သန့်စင်ထားသောဂျုံမှုန့်နှင့်ဆားကိုထည့်ပါ ပေါင်းစည်းသည်အထိရောမွှေပါ။
brownie batter ကိုပုံစံခွက်တစ်ခုထဲသို့လောင်းထည့်ပါ ၂၀ × ၂၀ စင်တီမီတာကို greaseproof စက္ကူဖြင့်စီထားပြီးခွက်တစ်ခုထဲတွင်မုန့်စိမ်း ၃ ဇွန်းကိုချန်ထားပါ။ မျက်နှာပြင်ချောမွေ့။
ယခု cheesecake ကိုပြင်ဆင်ပါမရ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ခရင်မ်ချိစ်ကို ၂ မိနစ်ရိုက်ပါ။ ထို့နောက်ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်ပြီးပေါင်းသည်အထိထပ်ရိုက်ပါ။
ချိစ်ကိတ်မုန့်ကိုလောင်းပါ brownie အကြောင်း
ယခုကြိုတင်မှာထားသော brownie batter နှင့်အနည်းငယ်ထည့်ပါ ရှုပ်ထွေးနေသည့်ပုံစံ dulce de leche ဒီမှာနဲ့အဲဒီမှာ ပြီးရင်သစ်ကြံပိုးခေါက်အနည်းငယ်ဖြန်းပေးပါ။
ဓား (သို့) သီတံချောင်းနှင့်ယူပါ ပုံဆွဲဖန်တီးပါ cheesecake အလွှာပေါ်တွင်.
နောက်ဆုံးတော့ မိနစ် ၄၀ ခန့်ဖုတ်ပါ.
ပြီးတာနဲ့ caramel နဲ့သစ်ကြံပိုးခေါက် brownie cheesecake ကိုမြည်းစမ်းကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ချက်ပြုတ်နည်းများ » အချိုပွဲ » dulce de leche နှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်တို့နှင့်အတူ brownie cheesecake